Amafutha embewu emnyama aphatha zonke izifo - Afrikhepri Fondation
Amafutha wembewu emnyama alapha zonke izifo
TheAmafutha ocwebe omnyama angcwele avela embewini imbali encane ekhula emthunzini wamafutha aseGibhithe.
Ngokuvamile kubizwa kulo lonke i-Orient "uwoyela omnyama kakhayini". Kutholwe nesigaxa samafutha ethuneni likaTutankhamun. Odokotela bomuntu bomuntu bePharaohs basebenzise isikhunta esimnyama ukusiza ukugaya, ukuphathwa izinyo, ukuqaqanjelwa yimizwa, izifo, ukuvuvukala, ukuphazamiseka komzimba kanye nokuphefumula (i-asthma). Isithunzi sale nzalo sasinkulu kangangokuba sasiyingxenye yokupheka kwansuku zonke. Ngisho nanamuhla, isinkwa eMpumalanga sivame ukufafazwa ngofini omnyama.
Nefertiti futhi Cleopatra owawudume ngemincintiswano ngobuhle bayo nangezithelo zayo ukuphelela isikhumba sabo axwayiswa abasebenzisi impilo nobuhle uwoyela. Yingakho eGibhithe amafutha we-nigella abuye abizwe ngokuthi "amafutha kaFaro". Amanye amagama isibaluli kuye ngenxa izimfanelo zakhe amaningi njengoba emangalisayo: Habbat al sawda okusho imbewu elibusisiweyo Habbat Al Baraka: imbewu inhlanhla ... Ngoba uwoyela ikhumini elimnyama noma caraway ohlala kuso kuyakhulunywa ngaso eBhayibhelini futhi ekugcineni immortalized ngomprofethi Muhammad e hadith: "ukuthi ikhumini elimnyama uphulukisa konke kodwa ukufa"!
Lodumo eMpumalanga, eyaziwa bese lisetshenziswa ekwelapheni Chinese, liphinde lokuthola usizo oluyilo ezinkantolo lasendulo ezinconywe Indian imithi Ayurvedic (obonwa-World Health Organization) ngokuthi "Kalinji" amandla ashisayo. Uma waya India wena ngempela kudliwa leli imbewu elimnandi: yena ihlobise "naan", Indian isinkwa amakhekhe. Le mithi yendabuko yazi ukuthi ukuvimbela kungcono kunokwelapha kanti i-cumin emnyama kusiza ukuvimbela izifo eziningi.
Kuyaziwa ngokuqinisa isimiso somzimba sokuzivikela futhi sisetshenziswa kusukela ezikhathini zasendulo emhlabeni wonke.
EGibhithe lasendulo, ngesikhathi Touthankhamon, isivele ethandwa kakhulu kusukela sathola engcwabeni lo faro, futhi kuze kube unyaka owodwa ayizinkulungwane Avicenna osebenzelana e "incwadi yakhe ethi Incwadi Ukuphulukisa Ukudumisa le mafutha. Abantu abaningi baye basebenzise njalo ngezici zayo ezingalingani.
ENdiya, uye waziswa njalo ekuphekeni nasekudleni.
Kuyingxenye yomuthi wendabuko waseKoran.
Amafutha e-Nigella ayaziwa futhi asetshenziswa eYurophu kuze kube sekhulwini le-17.
Abaningi bezempilo bayavuma ukuthi iphuzu layo eliqinile liyinhloko esenzweni salo ngokumelene nezimo eziphuthumayo.
Uwoyela we-Nigella uvimbela uketshezi kwezingqamuzana zeseli ngomphumela wokulwa nokulwa (anti-ukuguga) futhi uvimbela ukwakheka kwama-molecule wokuvuvukala.
Ngakho-ke kuzuzisa ngokuphelele isikhumba, futhi ikakhulukazi ukunciphisa izimo ezivuthayo ezibangelwa ukucindezeleka, ukungcola, izifo noma ukuguga. Isetshenziswe njengendlela yokwelashwa kwangaphakathi njengokusetshenziswa kwangaphandle.
Olumnyama uwoyela ikhumini unothile ithatha, ke ihlanganisa glycosides, phenolic ezibangela, carotene, amaminerali (iron ne phosphorous), ama-enzyme kanye ebalulekile polyunsaturated okunamafutha acid (linoleic acid).
Ukudla njalo eNigella Oil kungakhotha izinzuzo eziningi.
Izinzuzo eziyinhloko zamafutha aseNigella
Qinisekisa isimiso somzimba sokuzivikela ngokugqugquzela ukukhiqizwa kwama-hormone-like (regulators of immunity)
Kugayeke (siqinise izitshalo emathunjini), kuyilapho kunciphise isibalo amagciwane ayingozi futhi izinkinga zesisu (esiswini kanye ubuhlungu emathunjini, ukubuyisa ...)
Hlanganisa i-bronchi futhi unciphise ukusabela okwenziwe izifo (uketshezi othulini, impova, i-asthma ...)
Ukuhlanza isikhumba nokusebenza ngezidakamizwa ezithile ezifana ne-ecopema ye-atopic noma i-psoriasis, naku-acne
I-Soothe ishisa, isikhumba esihlambulukile nokushisa kwelanga
Ukulondoloza amagciwane nokuvimbela amakhaza, i-bronchitis, i-influenzas, i-fever fever ...
Nciphisa izinga le-glucose egazini
Ukulinganisela ukucindezelwa kwegazi (umfutho wegazi ophezulu)
Vikela izinkinga zenhliziyo
Ukugqugquzela ukuphefumula, ukuvuselela ubuchopho-oxygenation (ukuhlushwa)
Okunye ubufakazi obuvela imiphumela eyatholakala nakwezinye izimo eziningi ezinzima: ikhanda, inyumoniya, autonomic yokukhathala kwemizwa, izimuncagazi emathunjini, ubuhlungu kwamazinyo, isifo sikashukela, i-jaundice, hemorrhoids ezinso, ubuthakathaka, inhlalakahle zesifazane, kusilela i-lactation, ukuleleka, i-rheumatism, i-mycosis, izicubu ...
Ngaphandle, uwoyela Nigella isetshenziswa ngezici zawo ukuzola, Lentulo, ekuvuseleleni futhi eqeda ukuvuvukala (at izifo rheumatism, ukuze akhulule zibe, ubuhlungu bamalunga noma iphimbo izinwele). Kuboniswe ikakhulukazi isikhumba esibucayi, esomile noma esicasulayo.
Amafutha eNigella, imbewu yekhumini emnyama, uwoyela omnyama khumini (waseGibhithe), amaphilisi ayi-150 ane-500mg ...
Kugcine ukubuyekezwa ngoNovemba 25, 2020 2:32 PM
SOURCE: QAPHELA OIL
Izimfundiso zika-Eckhart Tolle (Amavidiyo)
Lokho AbaNtshonalanga Abakulahla (Ingxenye 1)
Incwadi ikigai: indlela Japanese Yenjabulo (Audio)
Iyini incazelo yefulegi yokuzalwa kabusha kwe-kamite?
Ukuqinisekisa Ukuphulukiswa - i-AUM (Audio)